ဒေသဆိုင်ရာ SEO: ရည်ညွှန်းချက်ဆိုတာဘာလဲ။ ကိုးကားတည်ဆောက်ခြင်း? | Martech Zone
ဒေသဆိုင်ရာ SEO: ကိုးကားချက်ဆိုတာဘာလဲ။ ကိုးကားတည်ဆောက်ခြင်း?
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 20, 2020 တနင်္လာနေ့, မေလ 18, 2020 Douglas Karr
ဒေသဆိုင်ရာရှာဖွေခြင်းဆိုသည်မှာဒေသတွင်းရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆို၏အသက်သွေးကြောဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြို့ပြကွဲပြားခြားနားသောမြို့များ၊ အမိုးများဆောက်လုပ်သည့်ကန်ထရိုက်တာများသို့မဟုတ်သင့်အိမ်နီးချင်းစားသောက်ဆိုင်များတွင်တည်ရှိသည့်နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်ကိုမူအရေးမကြီးပါ။ အွန်လိုင်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုရှာဖွေခြင်းသည် ၀ ယ်ယူမှုတစ်ခုနောက်တစ်ခုဖြစ်လာရန်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းပြသသည်။
ဒေသတွင်းရည်ညွှန်းကိုးကားရန်သော့ချက်မှာအချိန်ကာလတစ်ခုအနေဖြင့်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဒေသခံအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည့်သီးခြားမြို့ကြီးများ၊ စာတိုက်သင်္ကေတများ၊ ခုနဒေသများနှင့်အခြားဒေသဆိုင်ရာအမှတ်အသားများနှင့်ပြောဆိုသောကောင်းမွန်သောဖွံ့ဖြိုးပြီးစာမျက်နှာများရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်သော့ချက်မှာစီးပွားရေးလမ်းညွှန်များကသင့်အားစာရင်းပြုစုရန်ဂူဂဲလ်ရှာဖွေသူများကသင်၏ဒေသကိုမှန်ကန်စွာစစ်ဆေးနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။
ဒေသဆိုင်ရာရှာဖွေမှုဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှဂူဂဲလ်သည်ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား၎င်းတို့၏ပထဝီဝင်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာ“ မြေပုံအထုပ်” မှတစ်ဆင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်စေသည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ဒေသတွင်းတက်ကြွသောတည်ရှိမှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များ၏ထိပ်ကိုတက်သွားနိုင်သည်။
သို့သော်လမ်းညွှန်ရှိခြင်း၊ Google My Business အကောင့်ရှိခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများစုဆောင်းခြင်းသည်ဒေသခံရှာဖွေမှုအတွက်သော့ချက်မဟုတ်ပါ။ ဂူဂဲလ်သည်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုမရှိဘဲအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ဖော်ပြချက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည့် algorithms များတည်ဆောက်ရာတွင်အလွန်ကျွမ်းကျင်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားအဖြစ်လူသိများကြသည် ကားအညွှန်း.
ကိုးကားခြင်းဆိုသည်မှာဒစ်ဂျစ်တယ်ဖော်ပြချက်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ထူးခြားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်လိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပါဝင်နိုင်သည်။ အချိတ်အဆက်မဟုတ်ဘူး
အညွှန်းတည်ဆောက်ခြင်း သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်အမြဲတမ်းကိုးကားချက်များဖြင့်ဖော်ပြရန်သေချာစေရန်မဟာဗျူဟာသည်။ မကြာခဏနှင့်မကြာသေးမီကသင်၏စီးပွားရေးနှင့်ထူးခြားသောအွန်လိုင်းကိုးကားမှုကိုရှာဖွေသည့်အခါသင်၏စီးပွားရေးသည် ပို၍ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး၎င်းတို့ကိုသင့်အားအွန်လိုင်းမှဒေသတွင်းရှာဖွေမှုများအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ပေးလိမ့်မည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ဒေသတွင်းအွန်လိုင်းရှိနေခြင်းကိုတည်ဆောက်သောကြောင့် Citation Building သည်ယခင်ကထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ဂူးဂဲလ်ရှာဖွေမှုအားလုံး၏ထက်ဝက်သည်ဒေသဆိုင်ရာရည်ညွှန်းချက်ရှိသောကမ္ဘာတွင်ဤသည်မှာအရေးကြီးသောမဟာဗျူဟာဖြစ်သည်။
အသံရှာဖွေမှုတိုးများလာသည်နှင့်အမျှတသမတ်တည်းတိကျသောအကိုးအကားများရှိခြင်းသည် ပို၍ ပင်အရေးပါလာသည်။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အဖြေမဟုတ်လျှင်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှသင်ပေးသောအချက်အလက်သည်တိကျခြင်း မှလွဲ၍ အသံရှာဖွေမှုသည်သင့်အားaည့်သည်လာရန်အခွင့်အရေးမပေးပါ။
လူ ၅ ဦး လျှင် ၁ ဦး သည် voice search ကိုအသုံးပြုနေကြပြီး voice search အသုံးပြုသူများ ၄၈% သည်ဒေသဆိုင်ရာစီးပွားရေးအချက်အလက်များကိုရှာဖွေကြသည်။
Uberall ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းများ၊ မြေပုံစနစ်များနှင့်ရောင်းအားကိုမောင်းနှင်သည့်မီဒီယာလိုင်းများအားလုံးတွင်စတိုးဆိုင်တည်နေရာအချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Uberall သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအွန်လိုင်းတည်ရှိမှု၊ ဂုဏ်သတင်းနှင့်ဖောက်သည်များအကြားဆက်သွယ်မှုများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ တည်နေရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိုcloud်းတိမ်သည်.
Uberall Demo တောင်းခံပါ
Uberall ကိုလည်းစတင်ခဲ့သည် Uberall မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းဒေသခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များကိုအထောက်အပံ့ပေးရန်ရည်ရွယ်သည့်၎င်း၏အခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ Uberall Essential ကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏စာရင်းများကိုဂူဂဲလ်၊ အက်ပလီ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်၊ Bing၊
သူတို့ကဒီအချက်အလက်တွေကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးပြီ ကိုးကားတည်ဆောက်ခြင်း၎င်းသည်ကိုးကားခြင်း၊ ကိုးကားခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်မဟာဗျူဟာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခြုံငုံသုံးသပ်သည်။
Tags: ကျွန်တော့်စီးပွားရေး Googleinfographicစာရင်းများဖုန်းနံပါတ်တစ်ကိုးကားကဘာလဲ
B2B ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုပြန်လည်စဉ်းစားခြင်း။ ဤနေရာတွင်အနိုင်ရသောကမ်ပိန်းများမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း